စက်ရုံထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း (၈)မီဂါဝပ် အထိရှိသော်လည်း မြို့၏ သုံးစွဲမှုမှာ (၁)မီဂါဝပ်ခန့်အထိ ကျဆင်းလျက် ရှိသောကြောင့် စက်ရုံ၏ လောင်စာသုံးစွဲမှုနှင့် လျှပ်စစ်ရောင်းချရမှု နည်းပါးနေခြင်းကို အချိုးချပါက လွန်စွာ ကွာဟနေခြင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ပါသဖြင့် မြို့တွင်း မြို့ပြင်ဓါတ်အားလိုင်းများ တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ရောင်းချမှု မြှင့်တင်ရေးကို စက်ရုံမှ အလွန်အမင်း အားထုတ် နေရ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံးသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု
ယနေ့ ၁၁/၁၁/၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ(ကော့သောင်း) မှ ကော့သောင်း ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအပေါ် အထင်အမြင်လွှဲမှားနေမှုများသည် အမှန်တကယ် ဟုတ်/မဟုတ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ (ကော့သောင်း) တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံ
ယနေ့ ၁၁/၁၁/၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ(ကော့သောင်း) မှ Garden Hotel ၌ တတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား အချင်းချင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါသည်။
အသင်းတိုးတက်ရေးနှင့် မြို့ရွာစည်ပင်ဖွံ့ဖြိုး ၊ ပွင့်လင်းလာရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် အောက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
4 ဦး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်
ကော့သောင်းခရိုင်၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူထုအခြေပြု၊ ပြည်သူ့အကျိုး ဆောင်ရွက် နေကြသော ပရဟိတ လူမှု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းဝင်များ၊ ကော့သောင်းမြို့ ကျောင်းသား/သူဟောင်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း ကော့သောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ ဒေသအတွင်း ပြည်သူလူထု အကျိုး စီးပွား၊ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အောက်ဖေါ်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များအလိုက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း နှီးနှောဖလှယ်ကြပါသည်။
(၁) လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်
(၂) ဘိုးဘွားရိပ်သာ ပြန်လည် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်
(၃) စာကြည့်တိုက်များ ပြန်လည် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်
(၄) ဒေသအတွင်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်
(၅) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ကောင်းမွန်တိုးတက်စေရန်
စသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း နှီးနှော ဖလှယ်ကြပါသည်။
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သောအဖွဲ့အစည်း (၂၁)ဖွဲ့ မှ လူဦးရေ (၄၂) ဦးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း ကော့သောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား (၁၈) ဦး စုစုပေါင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ (၆၀) ဦးဖြင့် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးစဉ်
အေးမြကန်သာရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ခြင်း ကြီးကြပ်အဖွဲ့ဝင်မှဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်
Photo By : Kawthaung Kawthaung fb မှရယူသည်။
၈၈ တို့၏ တနင်္သာရီခရီးတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုး အဓိက ဆွေးနွေးရ
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား များ၏ တနင်္သာရီတိုင်း ခရီးစဉ်အတွင်း စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံများ ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာများကို အဓိက ပြောခဲ့ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လိုလားတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ် နေထိုင်မှုဘဝတွေ၊ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့တာတွေ၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ကိစ္စတွေကို ကျနော်တို့ စိုးရိမ်တယ်။ ရေရှည်ကို မျှော်မှန်းတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဉာဏ်မျိုးနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်မျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့၊ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့ အကြောင်း ပြည်သူလူထုတွေကို ဆွေးနွေးသွားပါတယ်” ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သူ ကိုပြုံးချို က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း လှည့်လည်ဟောပြောသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမင်းဇေယျာ၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ မသက်သက်အောင်တို့ ပါဝင်သည့် ၁၅ ဦးပါ ၈၈ အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ နေ့တွင် မြိတ် ခရိုင်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ခရီးစဉ်ကို စတင်ပြီး ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကော့သောင်းခရိုင်၌ အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
တနင်္သာရီတိုင်းသည် သတ္တုသိုက်၊ သစ်တော၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းများ အလွန် ပေါကြွယ်ဝ သည့် ဒေသတခု ဖြစ်သော်လည်း ဒေသခံများအနေနှင့် ၎င်းသယံဇာတ၏ အသီးအပွင့်များကို မခံစားရဘဲ ဆိုးကျိုးများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အကြောင်းများကိုလည်း ခရီးစဉ်တလျှောက် လူထုတွေ့ဆုံပွဲများတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“တနင်္သာရီတိုင်းဟာ အမိ မြန်မာပြည်မှာ သတ္တုသိုက်တွေ အင်မတန် ပေါကြွယ်ဝတဲ့ တိုင်း၊ ဂက်စ်တွေ ထွက်နေ တဲ့ တိုင်း၊ ဗမာတပြည်လုံးရဲ့ သတ္တုတွေကို အများဆုံး ထုတ်ပေးနေတဲ့ ဟောဒီတိုင်းမှာ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာကို အများဆုံး ရှာပေးနေတဲ့ အထဲမှာလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဒေသကို ကျေးဇူးဆပ်လိုက်ပုံက ကားကို လူက ကြိုးနဲ့ ပြန်ဆွဲနေ ရတာ တော်တော် အသည်းနာဖို့ ကောင်းတယ်” ဟု ခရီးစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အဖြစ်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ ကော့သောင်းမြို့ မဉ္ဇူသက ခန်းမရှေ့ ဟောပြောပွဲတွင် ကိုမင်းကိုနိုင် က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းပြင် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း တည်ဆောက်မည့် မြိတ်နှင့် လည်ပတ်ဆဲ ကော့သောင်းရှိ နေရာများသို့ သွားရောက်ကာ ဟောပြောခဲ့ကြသည်ဟုလည်း ၈၈ ကျောင်းသားများကပြောသည်။
“ဒေသခံတော်တော်များက ဒီကျောက်မီးသွေးစက်ရုံရဲ့ အနာဂတ် ရင်ဆိုင်ရမယ့် ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုမျိုး ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆာင်ရွက် ပြီးတော့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရှာကြမလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးပါတယ်” ဟု ကိုပြုံးချို က ပြောသည်။
မြိတ်ခရိုင် ၈၈ ကျောင်းသားအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုတင်ကိုကိုဦး ကလည်း “သူ့ (ကိုမင်းကိုနိုင်) အနေနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ ထပ်တူ ထပ်မျှပဲ။ ဒီကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကို လုံးဝ မထောက်ခံဘူး။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို ရအောင် တောင်းမယ် ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို ပြောသွားတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြိတ်မြို့နယ် အရှေ့ဘက် ၁၇ မိုင်အကွာ လော့လော့ကျေးရွာ အနီးရှိ ၅ဝ မဂ္ဂါဝပ်ထုတ် ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံကို ဖျက်သိမ်းပေးပြီး သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ဖြင့် အစားထိုး လည်ပတ်ရန် စက်ရုံတည်ဆောက်မည့် နေရာ အနီးတဝိုက်ရှိ ကျေးရွာများဖြစ်သည့် ကျောက်ဖျာ၊ လော့လော့၊ သမုတ်နှင့် ကျွဲကူး ကျေးရွာများမှာ ဒေသခံ ၁,၆၇၇ ဦး၏ လက်မှတ်ဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့က သမ္မတထံ အသနားခံ တင်ပြထားသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ လော့လော့ကျေးရွာ ဟောပြောပွဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက်များအနေနှင့် ပြည်သူလူထုနှင့် တသားတည်း ဖြစ်သည်ကို ဖေါ်ညွှန်းလိုသည့်အတွက် ဒေသခံတဦးကိုလည်း စင်ပေါ်တက်ရောက် ဟော ပြောစေခဲ့ သည်မှာ ခရီးစဉ်တလျှောက်၏ ထူးခြားချက် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ကိုတင်ကိုကိုဦး က ပြောသည်။
ကော့သောင်းမြို့ မဉ္ဇူသကခန်းမရှေ့ ဟောပြောပွဲတွင်လည်း ကိုမင်းကိုနိုင် က “ဘယ်စီမံကိန်းမဆို လုပ်ချင် တဲ့ သူတွေကတော့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အကောင်းချည်း ပြောမှာပဲ။ ပြီးတော့မှ ဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စတွေ မရှူနိုင် ၊ မကယ်နိုင် ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှ ကိုယ်လက်လွန် ဖြစ်သွားတဲ့ စာချုပ်တွေအတွက် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ စောစော စီးစီးကတည်းက သိခွင့်ရှိရမယ်။ သဘောမတူရင် သဘောမတူကြောင်း တခဲနက် ဆန္ဒပြခွင့် ရှိရမယ်” ဟု ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကော့သောင်းမြို့ လူနေရပ်ကွက်ကြားရှိ လည်ပတ်ဆဲ ဖြစ်သည့် သန်းဖြိုးသူ ကုမ္ပဏီလိမိတက်ပိုင် (၈) မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံသည် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှု၊ ထောက်ခံဆန္ဒပြမှုနှင့် ကြုံနေဆဲ ဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ ကော့သောင်း ခရီးစဉ် (ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း)
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ ခရီးစဉ်အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ယနေ့ ၁၈/၁၁/၂၀၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည်(၂း၀၀)နာရီတွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ(ကော့သောင်း) သည် ကော့သောင်းမြို့ Garden Hotel ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဖေါ်ဆောင်ခရီးစဉ် အဖြစ် ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအဝင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၏ ကော့သောင်းမြို့ခရီးစဉ် အတွက် အကြိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ (ကော့သောင်း) သဘောထားကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်
6 ဦး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်
တစ်မြို့တည်းသားတို့ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်း မဖြစ်စေလိုသော စေတနာဖြင့် ကော့သောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတို့ ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံသို့ သွားရောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြရာ...
လျှပ်စစ် ဈေးနှုန်း တယူနစ်လျှင်ကျပ်(၂၀၀)အထိ တဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချပေးရန် အစီအစဉ်သည် မကြာမီ လ ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်လာစရာရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိတွင် စက်ရုံအတွက် မထင်မှတ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှု အလွန်အမင်း မြင့်တက် လာနေသည်ကို ကြုံတွေ့နေရပါ သဖြင့် မြို့လူထု အနေဖြင့် တည်ဆောက်ရေး ကာလတွင်ဖြစ်တတ်သော သဘောသဘာဝကို နားလည် သည်းညည်းခံသင့်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်သူဖက်မှ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို ကြိတ်မှိတ်ဖြေရှင်းနေရချိန်တွင် ပြည်သူလူထု သိသင့်သော ဈေးနှုန်းနှင့် ခန့်မှန်းချိန် ကိစ္စများကို မေ့ပျောက်မနေပဲ စက်ရုံ၏ သတင်း ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်တစ်ခု ပြည်သူ လူထုအတွက် အမြန်အကောင်အထည်ဖေါ်သင့်ကြောင်း ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ အကြံပြုသည်ကို စက်ရုံဖက်မှလည်း ကျေနပ်စွာ လက်ခံပါသည်။
ကော့သောင်းမြို့သာမက အခြားမြို့များမှပါ အထူးစိုးရိမ်ကြောင့်ကျနေသော ကျောက်မီးသွေး လောင်စာဆိုးကျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု ဆိုးကျိုးများကို သေချာစွာလေ့လာသောအခါတွင် ၊ ရှေးယခင်က တည်ဆောက်ကြသော ကျောက်မီးသွေးလောင်စာသုံး စက်ရုံများကြောင့် ဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်ခဲ့ကြသည် မှန်သော်လည်း ၊ ကော့သောင်းမြို့ မှ ယခုတည်ဆောက်ပြီးစီးသွားသော ဓါတ်အားပေးစက်ရုံသည် ဂျာမဏီ တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ခေတ်မီနည်းပညာများအတိုင်း တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် အသံဆိုး အနံ့ဆိုး နှောက်ယှက်မှု လုံးဝမရှိသေးကြောင်း လက်တွေ့ မြင်သိခဲ့ရပါသည်။ လောင်စာမှ ထွက်လာသော ပြာနှင့် အဆိပ်ငွေ့များကို စစ်ယူသောစံနစ် တည်ဆောက်ထားရာတွင် ပင်မ စက်ရုံအရွယ်အစားထက် တစ်ဆခန့်ပိုမိုကြီးမားသော စက်ရုံဖြင့် ထပ်ဆင့် စစ်ယူပြီးနောက် ဘိလပ်မြေအမျိုးအစားတစ်မျိုးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းထုတ်လုပ်ထားပြီးကြောင်း ၊ ယင်းဘိလပ်မြေကို စက်ရုံဝင်းအတွင်း လက်တွေ့ သရုပ်ပြ ကားလမ်း စတင် ခင်းထားပြီဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကျိုးအဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။ ပြည်ပမှ ဘိလပ်မြေတင်သွင်းနေရသော နိုင်ငံခြား ငွေယိုပေါက်ကို ၇၅ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာစေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
သမရိုးကျ စက်ရုံများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သော သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများသည် ကော့သောင်းမြို့မှ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် မပတ်သက်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အမှန်တကယ်ဟုတ်/မဟုတ် အချိန်ယူစောင့်စားကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သက်သေထူနိုင်ပါသည်။
by; Kawthaung kawthaung facebook
ယနေ့ ၁၁/၁၁/၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ(ကော့သောင်း) မှ ကော့သောင်း ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအပေါ် အထင်အမြင်လွှဲမှားနေမှုများသည် အမှန်တကယ် ဟုတ်/မဟုတ် ၊ ထောက်ခံနှင့် ကန့်ကွက် အင်အားစု များ ယှဉ်ပြိုင်မှုပပျောက်ရေး၊ မြို့လူထု အေးချမ်းစွာ လက်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုအဖြေရှာ သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ (ကော့သောင်း) တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံ
အဲဒီနောက် ကော့သောင်း ကျောက်မီးသွေးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအပေါ် အထင်မြင်လွဲမှားနေမှု နှင့် ကန့်ကွက် ၊ ထောက်နေမှုတိ်ု့အား သိရှိ အဖြေရန် အဆိုပါစက်ရုံသို့ သွားရောက်လေ့လာ သုံးသပ် ခဲ့ကြ ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ(၁၁)ရက် ၂၀၁၂ ၊ တတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲ
စမ်းချောင်းကိုကိုကြီး facebook မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ ဗွီဒီယို မိန့်ခွန်း
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် ၊ မွန်းလွဲ ၃း၁၅ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိ ထိုင်းနိုင်ငံ ချာအမ်း(Cha Am) မြို့ ၊ Holiday Inn Regent Resort Beach ရှိ Sema အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြည်ပရောက် မြန်မာ ကျောင်းသားများနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပေးပို့သော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ဗွီဒီယို နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်း . . .
88 Generation Students facebook မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
88 Kawthaung App အားရယူရန် အောက်တွင်နှိပ်ပါ ။ - ။
ကောင်းမျိုးအထွေထွေရယ်နှင့် ချွန်မြစေစော "ဒေါင်းအိုးဝေ" ရယ်လို့တွန်ကြစေသား။ ။
မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းရှိ နအဖ စစ်အစိုးရ၏ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး တပ်များတွင် ရုရှားနိုင်ငံထုတ် S 125 Neva/ Pechora ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်များကို စ...
မန္တလေး ဈေးချိုရှေ့တွင် ယနေ့ မွန်းတည့်အချိန်က ဗုံးပေါက်ကွဲ
မန္တလေးဈေးချိုတော်ရှေ့တွင် ဇွန် ၂၄ ရက်၊ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ခန့်က ရပ်ထားသော ဂျစ်ကားတစ်စီးပေါ်၌ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။မန္တလေ...
မူဘာရခ်ကို ဆန့်ကျင်သူ အင်အားစုများ အားကောင်း လာပြီး၊ စစ်တပ်က ပထမဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြသူတွေကို မပစ်ဘူးလို့ ကြေငြာလိုက်သည်။ စစ်တပ် လူထုဘက် ပါသွာ...
ထိုင်း - မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) ထိန်းချုပ်ဒေသ တနေရာ၌ မျက်နှာတွင် ဖောရောင်နေပြီး ကျောက်ကပ် ရောဂါ ခံစားနေရသူများနှင...
ရန်ကုန်မှာ သန်းရွှေ တရုတ်ပြည်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေ
အနောက်တိုင်း သံတမန်သတင်းရပ်ကွက်က လာတဲ့သတင်းအရ ဗိုလ် ချုပ် သန်းရွှေဟာ ပြေးဖို့ ပြင်နေပြီလို့ သိရတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ ဒေါ်လာ တဘီလီယံကျော်တန်တ...
ဘယ်သူ့ကို မဲပေးကြမှာလဲ ... (၂)…
“ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကို မဲပေးလိုက်သလဲ ကျွန်တော်သိတာပေါ့။ သူတို့လည်း သိမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မဲ ဘယ်သူရသွားလဲဆိုတာ တော့ သူတို့ပဲသိတယ်”
ကျွန်တော်သာ သမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့ရင် (ကျော်သူ) …
“ ထိုညက ကျွန်တော်အိပ်မက်မက်သည်။ နံနက်အာရုံတက်တွင်မက်သော အိပ်မက်ဖြစ်သည်။
“သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ကို လာသည်” ဟု။
“ကျော်သူ” . . .
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့မှာ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာ အားလုံးအသိပင်။ ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝသမိုင်းကလည်း အဆိုးဇာ တာ ပါခဲ့သလားမသိ။ . . .
ကျောပိုးအိတ်လေးကို လွမ်းမိတယ် .. မောင်လှဝင်း (မြင်းခြံ)
ကွန်ပြူတာ ဖန်သားပြင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်ရှေ့မှာ ထိုင်နေရင်းက တခါတလေတော့ ပျင်းရိငြီးငွေ့ပြီး တောရိပ် တောင်ရိပ်တွေကြားမှာနေခဲ့ရ တဲ့ ဘဝတွေကို သတိရမိတတ်တယ်။ . . .
ဗိုလ်ချုပ်ရှိစဉ်ကတည်းက မြန်မာတွေအပေါ် သဘောထားမမှန်ခဲ့တဲ့ BBC. (သွန်းနေစိုး)
မကြာသေးခင်ကလေးကမှ BBC ရဲ့ ၀က်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်က သတင်းကြောင့် ကျွန်တော်အပါအ၀င်မြန်မာတွေ တော်တော်ကြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ရိုဟင်ဂျာဘက်ပင်းပြီး ရေးလို့ပါ။ . . .
အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာ =
Copyright © ၂၀၁၂ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ(ကော့သောင်း) | Powered by အောင်ကျော်သူ